Yoga na Okpukpe andwa na Ime Mmụọ - WRSP
Yoga na-agụnye omume dị iche iche na echiche dịgasị iche banyere ihe mmemme ahụ pụtara. Na mbu okwu Sanskrit, onye ọkà mmụta bụ David Gordon White akọwawo yoga dị ka inwe 'nghọta dịgasị iche karịa nke ọ bụla okwu ọ bụla na Sanskrit Lexicon' (2012: 2). Ọ bụ ezie na ha na okpukpe Hindu nwere njikọ chiri anya, kemgbe ọtụtụ puku afọ, ndị Buddha ejiriwo nkà nke ntụgharị uche na nhịahụ nke ike mmadụ na-ejikọta yoga, nakwa ndị na-adịbeghị anya na-etinye aka na akụkụ nke Sikh, Muslim, Christian and contemporary spiritualities na omume ndị na-abụghị okpukpe.
Nkọwapụta ebe a, dịka ndị nke WSRP fọdụrụnụ, na-achọ inye nkọwa doro anya banyere ihe mmegharị. A na-emepụta profaịlụ ọhụrụ ma na-akwado ihe ga-eziga na profaịlụ. Nhazi nke profaịlụ dị na mmegharị oge, mana njikọ na ihe onwunwe na-enyocha ihe ndị ọzọ na akụkọ dị iche iche ga-enyekwa.
NKWU NDỊ YOGA GROUP (Nchịkọta Akwụkwọ)
Gurumayi (Swami Chidvilasananda) ma ọ bụ Siddha Yoga
Ahụike, Obi Ụtọ, Dị Nsọ Nhazi (3HO) ma ọ bụ Kundalini Yoga
Yoga zuru ezu (Sri Aurobindo)
AJỤRỤ NDỊ NA-AHỤ NDỊ NA-AHỤ NA YOGA
Maka ama ọzọ, kpọtụrụ ndị na-ahụ maka Ụlọ Ọrụ:
Suzanne Newcombe (Mahadum Open na OZI [dabeere na King's College London]) suzanne.newcombe@open.ac.uk
Karen O'Brien-Kop Ngalaba Okpukpe na Poolu na Center maka Yoga Studies, SOAS, Mahadum nke London) ko17@soas.ac.uk